विश्वभर पेट्रोलियम पदार्थ सस्तो नेपालमा किन महँगो ? – SaipalNews.com
Friday, 27, November, 2020	info@saipalnews.com
विश्वभर पेट्रोलियम पदार्थ सस्तो नेपालमा किन महँगो ?
काठमाडौं २९ फागुन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउमा पछिल्लो साता करिब २० प्रतिशतले कमी आउँदा पनि नेपाली उपभोक्ताले महँगोमा किन्नुपरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा सरकारले उच्च कर लगाएपछि नेपाल आयल निगमले नाफा राखेर महँगो मूल्यमा बिक्री गर्दा त्यसको भार उपभोक्तालाई परेको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सन् २०१९ को डिसेम्बर ३० मा प्रतिब्यारेल ६३।०५ डलर पुगेको कच्चा तेलको मूल्य बुधबार करिब आधा घटेर ३४।६५ डलरमा झरेको छ। साढे दुई महिनाको अवधिमा तेलको मूल्यमा भारी गिरावट आए पनि नेपाली उपभोक्ताले त्यसको फाइदा लिन पाएका छैनन्। उपभोक्ता चर्को मूल्यमा इन्धन किन्न बाध्य छन्। अहिले काठमाडौंमा पेट्रोलको भाउ प्रतिलिटर एक सय आठ रुपैयाँ छ। त्यस्तै डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर ९७ रुपैयाँ छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अहिले इन्धनको मूल्यमा कमी आएकाले केही दिनमा नेपाली बजारमा पनि मूल्य घट्ने निगमका अधिकारी बताउँछन्। मार्च १६ ९चैत ३ गते० मा नयाँ मूल्य आउने भएकाले त्यसपछि सस्तिने निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइत बताउँछन्। ‘मार्च १६ मा मूल्य घटेर आयो भने हामी पनि घटाउछौं,’ उनले भने, ‘नयाँ भाउ समायोजन भएर आउने मूल्यसूचीमा भरपर्छ।’ निगम सकेसम्म उपभोक्तालाई सस्तोमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्न प्रयत्नशील रहेको दाबी उनको छ।
विश्वमा फैलिएको कोरोना विषाणुको प्रभावले यातायात तथा औद्योगिक उत्पादनमा कटौती आउँदा इन्धनको माग पनि घटेको छ। माग घटेपछि साउदी अरेबियाले कच्चा इन्धन उत्पादन कटौती गर्न राखेको प्रस्ताव रुसले अस्वीकार गरेपछि ‘प्राइस वार’ हुँदा मूल्य घटेको हो।
मार्च १ को मूल्य अनुसार निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन९आइओसी० बाट पेट्रोल प्रतिलिटर ५२ रुपैयाँ ५० पैसा र डिजेल प्रतिलिटर ५६ रुपैयाँ ८८ पैसामा किनेको भए पनि विभिन्न शीर्षकमा कर जोडेर खरिद मूल्यको दोब्बरमा बिक्री गरिरहेको छ। आइओसीको खरिद मूल्यभन्दा पेट्रोल लिटरमा ५५ रुपैयाँ ५० पैसा र डिजेल लिटरमा ४० रुपैयाँ १२ पैसा महंगोमा बिक्री भइरहेको छ। सरकारले विभिन्न शीर्षकमा पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३९ रुपैयाँ ४८ पैसा र डिजेलमा प्रतिलिटर २२ रुपैयाँ ९० पैसा कर लिन्छ। यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
ब्रेकिंग न्यूज त्रिभुवन विमानस्थलमा भीषण आगलागी
आजदेखि माइक्रोचालक र सहचालकलाई पोसाक अनिवार्य, नलगाए पाँचसय जरिवाना !
अख्तियार प्रमुखमा घिमिरेको नाम सिफारिश
बेगनास तालमा डुङ्गा दुर्घटना, दुईको मृत्यु, पाँच बेपत्ता, उद्धार गर्न खोज्दा डुङ्गा डुब्यो
उपत्यकामा आज थप ८२२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
नेपालमा आज थप १७०३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप २३ को मृत्यु
उपत्यकामा आज एकैदिन थपिए ७८५ नयाँ कोरोनाका बिरामी
नेपालमा आज थप १६१४ जनामा कोरोना संक्रमण, थप २३ को मृत्यु
उपत्यकामा आज एकैदिन थपिए ८३५ नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए
नेपालमा आज थप १९८० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप १६ को मृत्यु
उपत्यकामा आज मात्रै थप एक हजार सात जनामा कोरोना संक्रमण
नेपालमा आज थप १७९०जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप २४ को मृत्यु
कुकुरको टोकाइबाट म-यो दुर्लभ रतुवा
अफगानिस्तानको तालिवान टोली पाकिस्तान आयो
महङ्गो हेलिकप्टरको प्रयोग गरेपछि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री विवादमा
जनता बन्दाबन्दीमा हाकिमहरू रामारोशन टुरमा